Best Yepamusoro Pressure grouting PU epoxy jekiseni pombi muchina muchina Polyurethane Foam Kuzadza Mugadziri uye Fekitori | Boyu
Coupler girisa minyatso
Yakakwira Pressure grouting PU epoxy Jekiseni pombi muchina muchina Polyurethane Foam Kuzadza
Garandi: makore 1.5
Maindasitiri Anoshanda: Zvokuvakisa Zvitoro
Mushure meWarranty Service: Vhidhiyo technical technical
Yemunharaunda Service Nzvimbo: Canada, Germany, Viet Nam, Saudi Arabia, Russia, Malaysia, Australia, UAE
Nzvimbo yekuratidzira: Germany, Viet Nam, Saudi Arabia, Russia, South Korea, Malaysia
Yekushambadzira Rudzi: Hot Chigadzirwa 2019
Waranti yezvakakosha zvikamu: 1 Gore
Zvikamu Zvikuru: Pump
Mushure mekutengesa Service Yakapihwa: Vhidhiyo technical technical, Overseas sevhisi nzvimbo inowanikwa
YAKANAKA KUTENGA Pfungwa: Yakakwira yekuchera simba
Type: Kudzivirira mvura Machine
Zita Rekushandisa: OEM
Maitiro Ekushandisa: High Pressure
Usage: Building bemhapemha
Rinoshanda: jekiseni Resin
Izwi Rakakosha: Polyurethane Foam Kuzadza Machine
Nzvimbo Yokutanga: Zhejiang, China
Kutengesa Units: Chinhu chimwe chete
Saizi imwechete pasuru: 55X45X25 cm
Kurema kwehumwechete: 9.000 kg
Pasuru Type: katoni
Uwandu (Sets) 1 - 5000 > 5000
Est. Nguva (mazuva) 10 Kutaurirana
Type Kudzivirira mvura Machine
Zita Rekushandisa OEM
Feature Jekiseni Resin
Kushandisa Kuvaka Kuputira
Iyo yakaoma furemu uye mubato wepurasitiki unogona kutakura iwo mutoro wakanyanya, uye mapatani pamubato anogona kusimbisa kukwesana uye kuve nechokwadi chekuchengetedza.
Yakakwira Simba Drill
Shandisa yakanakisa BOSCH yemagetsi chibooreso mumusika kuona kugadzikana uye kugona kwechigadzirwa chose.
Yakakwira Pressure Pipe
Inogona kuburitsa mvura mushe mushe pakamanikidza nharaunda.
1. Kuyera 9 KGS, inotakurika, nyore kutakura & kuchengetedza, yakakwira kuburitsa kumanikidza kusvika ku70MPa.
2. Jekiseni kumanikidza: 0-70Mpa (8000-10000Lb)
3. 1 nzira dzezvinhu feed-in: dururira
4. Iko kushandiswa kwesimba: 560W / 220V
Subway Station, Tunnel, Culvert, Foundation Improvement, Soil Settlement, Reservoir, Port Project, Top Slab, Crack, Kuvaka Joinha, Shrinkage Crack, Basement hairline kutsemuka etc. mvura yekumisa mapurojekiti.
Boora 1 seti 550W
Yakakwira Pressure Hose 1 pc 5M
Bvisa-kure Kukosha 1 seti
Kugadzira Kit 1 seti
Seal Set 1 seti
T Type Wrench 1 seti
Rabha Pad 10 pcs
Sefa 1 pc
Chinyorwa Mukombe 1 seti
Ningbo Zhuokang Energy-yekuponesa Machinery Co., Ltd.
Inowanikwa mumazambuko e Hangzhou Bay Bridge, Cixi, Ningbo Munici-pality, kambani iyi inoumbwa nemafekitori maviri. Ivo vari muGuanhaiwei Town uye Xinpu Town zvakateerana.
Iyo kambani yakagadzwa mu2013, iyo yakatangira iyo yaive Energy-yekuchengetedza In-simbi Fittings Fekitori. Kutanga kubva muna 1991, fekitori yakatanga kugadzira michina yemachira, mamiriro emhepo uye mota nezvimwewo. Inoshongedzerwa nemichina inodarika mazana maviri nemakumi maviri nematanhatu e CNC. Yakakwira yekumanikidza mvura inodonha ichimisa tsono, yakanyanya kumanikidza grouting michina pamwe ne polyurethane grouting zvinhu zvakatanga kugadzirwa nekutengeswa kubvira 2006, mvura yekumisa tsono kunyanya. Ndiko kutengeswa kwegore rose muna 2016 kwaive mamiriyoni zana nemakumi masere nemasere. Izvo zvigadzirwa zvakatengeswa kuRussia, Malaysia, Turkey Hong Kong uye makumi maviri nemasere emapurovhinzi epamba nemaguta. Iyo ndiyo inogadzira yakakura yekumisa mvura tsono muChina uye inotora mugove mukuru wemusika.
Ningbo Zhuokang Energy-yekuponesa Machinery Co, Ltd yakanyatsovakirwa pane bhizinesi zano rekutendeseka, kushandira pamwe kwechokwadi, kubatsirana pamwe uye kukura kwakabatana. Iyo yakazvipira kumisikidza mhando yemhando yekuziva uye nekupa iyo mutengi inokurumidza uye inogutsa sevhisi neiri nani chigadzirwa mhando.
Q1: Zvakadii nezvehunhu?
Isu tinoteerera zvakanyanya kune chigadzirwa mhando uye tarisa indasitiri munda anopfuura makore gumi
Q2: Chii chako MOQ?
MOQ yezvigadzirwa zvakasiyana zvakasiyana. Kazhinji, zvidimbu chiuru, asi kana tiine mamwe maodha pamwechete, diki QTY ichave iripo.
Q3: Ndedzipi nzira dzekubhadhara dziripo?
T / T, L / C, Paypal, uye Western Union.
Q4: zvinotora nguva yakareba sei kuita sampuro?
Mazuva 3-5 ayo anoenderana nekunetseka kwekugadzirwa kwayo.
Q5: Tinoda yakagadzirirwa, iwe unogona kuburitsa?
Pashure: yakafara ruvara PVC polyethylene nebwe isapinda membrane yekuvaka padenga gadheni, zambuko, railyway tunnel, denga dziva
Zvadaro: Yakakwira Pressure grouting PU epoxy Jekiseni pombi muchina muchina Polyurethane Foam Kuzadza
epoxy nebwe grouting jekiseni Packers simbi 13 ...
Grout jekiseni pombi High Pressure Grouting Equ ...
Flat Head munyatso M6 jekiseni Packers simbi 13 * ...
Red High Pressure PVC Hose Pipe kuti jekiseni M ...
Brass ruvara jekiseni Packers simbi 13 * 100mm A1 ...